Mety Hampidi-doza an’i Iran Ny Fifanakaikezan’ireo Mety ho Mpikambana Kabinetran’i Trump Amin’ireo Mpanandratra Olon’ny MEK · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 19 Novambra 2016 7:44 GMT
Vakio amin'ny teny Nederlands, Español, Français, русский, English
Maryam Rajavi, Mpitarika ny MEK, azo sary eto nandritra ny fivoriana tao Paris, mpiara-dalana akaiky amin'ireo voahonohono fa ho ao amin'ny kabinetran'i Donald Trump. SARIPIKA: Valam-bahoaka
Vitsy tamin'ireo vondron'olona fakan-kevitra sy manampahaizana manokana momba ny politika ivelany avy ao New York sy Washington no nanohana an'i Trump na ny nihevitra akory aza fa mety ho voafidy izy. Ankehitriny efa miraraka ny vovokoa ary hifindra monina tsy ho ela ao amin'ny Trano Fotsy ilay mpanankarembe mpandrendri-bahoaka ary dia mandeha daholo ny tombatombana amin'izay ho endriky ny politika ivelany hotanterahiny.
Ny tena mahasarotra ny fitarafana mialoha izay hataon'i Trump dia efa nalaza tamin'ny famadibadihana palitao iry miliaridera 70 taona ity. Tsy tena manana ideolojia elatra ankavanana loatra izy, fa mahay manararaotra amin'ireo andian-javatra lazaina ho lavitry ny “fametrahan-dalàna (politika)” satria fantany fa hainy tsara ny milalao ireo olona ifoton'ny elatra ankavanana. Talohan'ny taona 1987 izy dia nisoratra anarana ho Demaokraty, nialoha ny nifindrany ho ao amin'ny antoko Repoblikana, avy eo nankao amin'ny elatra havanan'i Antokon'ny Refôrma an'i Ross Perot, avy eo niverina indray tao amin'ny Demaokraty, ary—taorian'ny fandresen'i Obama—niverina tao amin'ny Repoblikana indray.
Nandritra ny fanentanana nataony ihany koa dia manjavozavo sy mivadibadi-kevitra izy amin'ny lohahevitra lehibe. Amin'ny fifotorany amin'ny lazan'i Hillary Clinton ho voromahery sy ny tsy fitiavan'ny vahoakan'i Etazonia intsony ny fitsabahana ara-miaramilan'ny fireneny any an-kafa, dia matetika i Trump no maka fijoroana mitoka-monina, izay indrisy nahafitaka na dia ireo avy amin'ny elatra ankavia sasantsasany aza izay milaza azy ho “tsy mampatahotra kokoa” amin'izao tontolo izao noho ny mpifaninana aminy. Saingy amin'ny lohahevitra lehibe dia matetika izy no mitady firotsahan'ny miaramila bebe kokoa fa tsy kely kokoa.
Notenenin'i Trump ny hampakarana ny tetibolan'ny tafika sy ny hanamafisana ny ady amin'ny ISIS. Raha nitaky izy tamin'ny voalohany ny hametrahana miaramila an-tanety an'i Etazonia miisa 20 ka hatramin'ny 30.000, dia nihemotra tamin'ny heviny izy avy eo ary nilaza fa i Arabia Saodita no tokony hanome ireo miaramila ireo. Nisy ny fitoana nilaza izy fa fahadisoana ny ady notohanan'ny Firenena Mikambana tao Afghanistan, nefa nisy ny fotoana nilazany fa nanohana ny fanaovana izany izy. Nisy ny fotoana nilaza izy fa tohanany ny fanesorana ny mpitondra ny firenena Mouammar Kaddhafi tamin'ny ady notohanan'ny Firenena Mikambana tao Libya, saingy niovaova hevitra hatrany izy avy eo momba io raharaha io.
Tsara kokoa ny miteny fa tsy misy afaka ny mahalala ny fomba itondran'i Trump ny politika ivelany. Efa hita ho mivoatra izany ankehitriny rehefa hitahita ankehitriny fa hipetraka eo amin'ny sezan'ny biraon'ny olona manana ny hery lehibe indrindra eto ambonin'ny tany ny filoha voafidy.
Fa filazana mialoha tahaka ny ahoana ary no azo atao amin'ny politikan'ny fitondram-panjakan'i Trump manoloana an'i Iran?
Na dia efa nampanantena ny hendrovitra ny fifanarahana amin'i Iran aza izy nandritra ireo adihevitra telo nifanaovan'ireo nifaninana ho filoha, dia nanoritra ny mpanadihady fa “mety” tsy hanao izany izy, indrindra moa fa efa nahazo ny fanohanan'ireo hafa manana hery eto amin'izao tontolo izao tahaka ny Vondrona Eoropeana sy i Rosia, izay mpiara-dia amin'i Tehran nefa efa nolambolamboin'i Trump fotoana maharitraritra ihany izay ny filoha Putin. Etsy ankilan'izany, nanasongadina ilay mpaneho hevitra Israeliana Zvi Bar’el fa raha “holalaovin'i Trump tokoa ny fifanarahana ara-nokleary”, dia hanome vahana an'i Iran izany, satria mety ho afa-manoritra an'i Etazonia ho manitsakitsaka ny fifanarahana izy ka hiantso ny hafa hanampy azy [Iran]. Ny tsy voalaza ihany koa dia hanome vahana ireo Iraniana mahazo toerana ambony ao amin'ny fahefana sady tsy tia fihavaozana no tsy tia ilay fifanarahana ihany koa, izay nahasahy nirona tamin'i Trump ny sasantsasany amin'izy ireo, izany mety ho fihetsika lian'ady izany avy amin'i Trump izany. Ny Mpitarika Faratampon'i Iran, Ali Khamenei, dia efa nivonona ny hanohana ilay mpanakarembe ara-pihariana raha niteny hoe “lazainy ho mpandrendri-bahoaka izy satria miteny ny marina”.
Ny mety hampazava kokoa ny politikan'i Trump dia ny fananganany ny kabinetrany, indrindra fa ireo ho ekipany eo amin'ny fiarovam-pirenena. Eto ireo mpanandrateny hiaro ny fandriampahalemana sy ny demaokrasia ao Iran sy ao Afovoany Atsinanana ny mety hanahy.
Ny roa amin'ireo tena mifaninana indrindra haka ny toeran'ny Sekreteram-panjakana dia ny mpitondratenin'ny Antenimieram-pirenena teo aloha, Newt Gingrich, sy ny ambasadaoro teo anivon'ny Firenena mikambana teo aloha, John Bolton. Tsy vitan'ny hoe manohana ny fanafihana ara-miaramila an'i Iran sy ny “fanovana fitondrana” ao izy roa tonta ireto, fa samy Amerikana “namana” akaiky indrindra amin'ny sasantsasany avy ao amin'ilay fikambanana mpitolona ara-politika fantatra ho Mojahedin-e-Khalq (MEK) izay saika halan'ny rehetra ao Iran noho ny niarahan'izy ireo tamin'i Saddam Hussein nandritra ny ady nifanaovan'i Iran sy i Iràka.
Ny MEK dia voatondron'i Etazonia ho fikambanana mpampihorohoro mandra-panaisotra azy tao anaty lisitra tamin'ny taona 2012. Taorian'ny nanonganana ny mpiaron'izy ireo, dia i Saddam Hussein, tamin'ny taona 2003, dia tsy nanana hery intsony ilay vondrona ary tsy manana olona fantadaza mendrika haja ao amin'ny politika iraniana ka nanatona azy ireo intsony rehefa voaporofo fa maro ireo fihoaram-pahefana lehibe nataon'io vondrona io nandritra ny taona vitsivitsy.
Manana tantara lava tamin'ny fanohanana ny MEK ihany koa i John Bolton ary matetika no vahiny nasaina tamin'ireo fivoriana nataony. Tamin'ny volana marsa 2015, raha tonga teo amin'ny dingana saropady ny Fifanarahana Ara-Nokleary ifanaovana amin'i Iran [mg], dia niantso amin'ny hanafihana ara-miaramila an'i Iran sy ny “fanohanana maventy avy amin'i Etazonia” ho an'i MEK “ikendrena hanovana ny fitondrana ao Tehran”. Tamin'ny vaninandro mafana [ila-bolantany avaratra] lasa teo, niteny nandritra ny fihaonan'ny MEK tao Paris i Gingrich, teo anilan'i Turki bin Faisal, lehiben'ny sampam-pitsikilovana Saodiana teo aloha. Nandeha lavitra i Gingrich ka niondrika am-panajana teo anoloan'ny mpitarika ny MEK, Maryam Rajavi, niantso azy tamin'ny voninahitra tiany indrindra hoe, “Filoha-voafidy”. Raha nifaninana ny hotendren'ny antoko repoblikana izy tamin'ny taona 2012, dia nilaza mazava i Gingrich amin'ny “hanoloana ny fitarihan'olona ao Iran”, milaza fa azo tanterahina ao anatin'ny taona iray izany.
Koa raha voatendry hanana ny anjara toerana roa lehibe indrindra eo amin'ny fiarovam-pirenena amin'ny fitondrana Trump i Gingrich sy i Bolton, dia hanana ny herim-panintonana indray ve ny fanandratana feno an'i Rajavi?
Misy ihany koa ireo mety ho mpikambana ao amin'ny fitondran'i Trump izay mpitarika ny voromahery anti-Iran. Nomena vola betsabetsaka ihany aid handsome sums to appear at MEK rallies ny Ben'ny tanànan'i New York teo aloha Rudy Giuliani, izay heverina homena ny toeran'ny lehiben'ny fampanoavana (minisitry ny fitsarana) hisehoany amin'ny fivoriana karakarain'ny MEK. Ny governoran'i New Jersey, Chris Christie, mpitarika ny ekipa tetezamitan'i Trump, dia efa nilaza an'i Iran ho “mampidi-doza kokoa noho ny ISIS”. Mike Flynn, izay mety ho sekreteran'ny fiarovana, dia niteny mazava voarakitra manao hoe, “Efa folo taona izao no niadiako tamin'ny Islam, na ny singa iray mandrafitra ny Islam” ary nitaraina momba ny “laingan'i Iran, ny lainga ataony amin'ny lafiny rehetra, ary ny fankahalana tsy miova aloaky ny vavan'izy ireo, isaky ny miteny ry zareo”.
Ny farany fa tsy ny kely indrindra, iray amin'ny mpanohana ara-bola ny fanentanana nataon'i Trump ny tompon'ny casino Sheldon G. Adelson, izay nanohana azy tamin'ny volana mey ka nanome $25 tapitrisa ho an'ny PAC anti-Clinton iray tamin'ny herinandro. Io Adelson io dia fantatra tamin'ny fanandrata-teny hidaroka baomba nokleary an'i Iran. Izy no mpanankarena indrindra faha-25 eto ambonin'ny tany sady mpiara-dia akaiky ny praiminisitra elatra havanan'i Israel, Benjamin Netanyahu, ary mpiara-miombon'antoka akaiky an'i Gingrich, izay notohanany tamin'ny fanentanana 2012. Akaiky dia akaiky an'i Netanyahu i Adelson ka mahavita manome 50 tapitrisa dolara isan-taona ny gazety iray mivoaka maimaim-poana isan'andro, Israel Hayom, izay mamely izay rehetra fahavalon'i Netanyahu ao amin'ny fireneny na avy amin'ny ankavanana izany na avy amin'ny ankavia. Tena mpinamana akaiky tokoa ka raha vao misy ny volavolan-dalàna manohintohina ny Israel Hayom mivoaka ao amin'ny Knesset, antenimieran'i Israely, vitan'i Netanyahu ny manohitra izany hatramin'ny fandravana ny governemantam-piaraha-mitantana tarihiny. Tafajoro ny governemantam-piaraha-mitantana manaraka rehefa nampanantena ireo mpiara-dia aminy fa tsy hametraka volavolan-dalàna mety hanohintohina an'i Adelson amin'ny resaka media.
Miankina amin-javatra maro ny politikan'i Trump manoloana an'i Iran, ary tafiditra amin'izany ny fifandraisany amin'i Moskoa, Riyadh ary Tel Aviv, ny heviny manoloana ny fidiran'ny miaramilan'i Etazonia any Iràka, Syria ary Yemen, ary ny fitakiana ataon'ny Kongesy tarihin'ny Repoblikana, izay manohitra ny Fifanarahana amin'i Iran ny ankamaroany. Saingy tena mampanahy indrindra ny fifandraisana amin'ny MEK, ary ny antony mahatonga ny Iraniana ho mailo ary hilaza ankarihary fa tsy miteny ho an'ny vahoakan'i Iran io fanompoana olona io, ary tsy tena mpanandra-peo hampanjaka ny demaokrasia ao amin'ny firenena ihany koa.